Android Archives - Page5of6- Saturngod
Posted on Updated December 21, 2010 December 21, 2010 by saturngod
Creative ကလည်း Android Tablet ကို ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ ထုတ်လိုက်တာကတော့ မကြာသေးပါဘူး။ Creative ဆိုတာကတော့ စကာင်္ပူရဲ့ အထင်ကရ company တစ်ခု ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အထူးသဖြင့် speaker တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမည်ရှိတဲ့ Brand လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Nook Color ကို order မှာပြီး ၃ ရက်အကြာလောက်ထင်တယ်။ တော်တော်လေး မကျေမနပ်ဖြစ်သွားရတဲ့ Product လို့ဆိုရမယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း 8 GB ကို S$360 ပဲ ပေးရတယ်။ အခု အချိန် မြန်မာငွေ ပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့ ၂ သိန်းခွဲလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ၇ လက်မ ဖြစ်တဲ့အတွက် စာဖတ်လို့လည်း အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ 16 […]
Posted on Updated August 24, 2010 August 24, 2010 by saturngod
Android ကို ဘယ်လို root ရမလဲလို့ mail နဲ့ ကော comment မှာကော မေးနေသူများ အောက်က link မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။ http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php/8877-One-Key-Root-for-Android-most-model-(REALLY-ONE-KEY!!!)
Droidx or iPhone4or Win7Phone
Posted on Updated August 4, 2010 August 4, 2010 by saturngod
Drioidx ကြော်ငြာ အသစ်လေး သဘောကျလို့ပါ။
ယောင်ခြောက်ဆယ် (Mobile Dev)
Posted on Updated June 7, 2010 June 1, 2010 by saturngod
အခုခေတ်က တော်တော်ယောင်လို့ ကောင်းတဲ့ ခေတ်လို့ ဆိုရမလားမသိဘူး။ Language တွေ ယောင်လို့ ပြီးလို့ Mobile Development လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ထပ်ယောင် စရာတွေ လာပြီ။ Android ကိုလုပ်မလား iPhone ကိုလုပ်မလား။ နောက်ပြီး ၂ ခုလုံးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဟိုးအရင်တုန်းက Mobile အတွက် Nokia Symbian ပဲရှိတော့ Java လေ့လာပဲ။ အခုတော့ ခေတ်တွေက ပြောင်းသွားပြီ။ Web Developer လည်း Mobile App ရေးလို့ရကုန်တော့ Web Developer တွေလည်း Mobile လိုင်းကို ယောင်တောင်တောင်နဲ့ လွယ်လွယ်လေး ကူးလို့ရနေပြီ။
Posted on Updated April 25, 2010 April 25, 2010 by saturngod
Android ဆိုတာကိုတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပါဘူး။ Android စထွက်ကာစက iPhone ကို ယှဉ်နိုင်လောက်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ မရှိပေမယ့် အခုအချိန် Android 2.1 မှာ တော်တော်လေးကို ပြီးပြည့်စုံလာသလို SDK ကလည်း တော်တော်လေးကို ကောင်းမွန်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Mobile Development ဆိုတာက တခြား Sotware Development ထက်စာရင် ပိုပြီး အောင်မြင်တဲ့ ဈေးကွက်လို့ ဆိုရမယ်။ လူတိုင်း Computer မသုံးတတ် ၊ မသုံးနိုင်ပေမယ့် လူတိုင်းနီးပါး ဖုန်းဝယ်သုံးကြတယ်။ နောက်ပြီး Mobile Software အတွက် ပိုက်ဆံကို မနှမြောကျတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Software အခွေတွေဟာ ခိုးကူးခွေတွေကြောင့် တစ်ခွေ ၁၀၀၀ နဲ့ ပေါပေါ ရပေမယ့် […]
Ornagai Android App
Posted on Updated April 14, 2010 April 13, 2010 by saturngod
ornagai ကို tsv နဲ့ babylon တို့အတွက်တော့ မထုတ်ရသေးဘူး။ ဒီနေ့ index ထောက်တာ စောစောပြီးရင် babylon , tsv , stardict တို့အတွက် ထုတ်ပေးဖို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် index ထောက်ဖို့ရေးရတာ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ Nexus One မှာတော့ မြန်ပေမယ့် ကျွန်တော် စမ်းတဲ့ HTC G1 မှာတော့ တော်တော်နှေးတယ်။ data တင်ပဲ 6.5 MB ရှိတယ်။ Ornagai Android ကိုသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့7MB လောက်တော့ နေရာယူလိမ့်မယ်။ English Myanmar ပဲ ပါပါတယ်။ ဇော်ဂျီကို font မရှိပဲ ဖတ်လို့ရတယ်။ CPU speed ကတော့ […]
Andoroid Ornagai demo
Posted on Updated April 13, 2010 by saturngod
နောက်ဆုံး ornagai data တော့ မဟုတ်သေးဘူး။ index မထောက်ရသေးလို့။ index ထောက်ပြီးမှ အသစ်ထပ်တင်တော့မယ်။ market မှာတင်ဖို့ပဲ $25 တောင်းလို့ မတင်တော့ပါဘူး။ zip ကို ဖြည်လိုက်ရင် apk ရမယ်။ apk ကို Android Market က App Installer နဲ့ သွင်းလို့ရပါတယ်။ ornagai.apk
Android မှာ ဇော်ဂျီမြင်ပြီ
Posted on Updated December 24, 2009 by saturngod
http://seanlin.me/archives/burmese-language-on-android/ မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါပြီဗျာ။ font ပဲရသေးတယ်။ keyboard တော့ ရသေးဘူး။ Cheer!!! Sean Lin